एउटालार्इ सनक चढ्दा | manka kura
« कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा
मो यानको छोटो कथा र अरू »
एउटालार्इ सनक चढ्दा
पश्चिमाहरू गजवका छन् । राम्रा र नराम्रा अनैाठा र वैज्ञानिक काम गर्न पनि यिनीहरूनै अगाडी छन् । २००९ मा एरिजोनाको टुसानमा हुंदा फिनिक्सवाट एकजना साथीले फोन गरेर भने अाज गजव देखियो नि दाइ । गजव के रहेछ भने जाडो को समय थियो तर एक हुल मानिसहरू कट्टु लगाएर लम्की लम्की वस चढ्न गएको देखियो रे । साथीका अनुसार उनीहरूले कम्मर भन्दा माथी सर्ट , स्वीटर कोट ज्याकेट, कतिले टाइ र खुट्टामा जुत्ता मोजा लगाएका थिए । मानेो जाडोमा लगाउने सवै लुगाहरू कम्मर माथि लगाएका थिए । तर कम्मर मुनी भने कटटु् मात्र लगाएका थिए भन्ने कुरा सुनाए । मैले साथीलार्इ नया कुरा थाहा पाइयो । यसवारे पुराना साथीहरूवाट वुझन जान्न पर्ला , किन त्यसो गरेका होलान् वुझन भन्दै, सन्चो विसन्चो अनि कामका कुरा गर्दै कुरा सकेका थियेो ।
मलार्इ खुल्दुली र जिज्ञासा लाग्यो । साथीले वुझेर भन्नु भन्दा म नै पहिला यस वारे केही पत्ता लगाउंकि भनेर मैले टुसानमा वसेका एकजना पुराना साथीसंग यसवारे कुरा राखे । वहांले पनि यस वारे सुन्नु भएको रहेछ तर अफैले भने देख्नु भएको रहेन छ । वाहाले थाहा पाउनु भएको यति कुरा भने भन्नु भयो । जनवरी महिनाको पहिलो वा दोस्रो हप्ता तिरको एकदिन केही केटाकेटीहरू अमेरिकाको केही ठाउंमा प्यान्ट नलगाइ कट्टटु मात्र लगाएर सबवेमा रेल चढेर रमाइलो गर्छन । यसलार्इ नो प्यान्ट सबवे राइड भन्ने गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाएको थिए । यसवारे यत्ति थाहा पाएपछि यस विषयमा खास चासो लागेन । किन भने कुनै विरोध स्वरूप वा कुनै घटनाको संझनाको लागि नभै केही केटाहरूले यसो गर्छन् भन्ने सुनेर ।
ल अव त यस कुराले अव हाम्रै नाम चलेका मिडियाहरूमा समेत चर्चा परिचर्चा पाउने भै सकेछ यो जावो कुराले पनि । मिडियामा मात्र हैन कुन वर्ष देखी यतै काठमाडेोको सडकमा नो प्यान्ट सबवे राइड मनाउन वेर छैन । हाम्रा युवा पुस्ताले पुस महिनाको ठिहीराउंदो एक दिन यस्तै कम्मर भन्दा माथी जाडोमा लगाउने लुगा टन्न लगाएर कम्मर मुनी प्यान्ट नलगार्इ कटटु मात्र लगाएर वस चढ्ने वा रत्नपार्क , न्युरोड घुम्न वेर छैन । त्यसो नहोला भन्न र भएमा अाश्चर्य मान्नु पर्ने केही कुरा छैन । अमेरिकामा एकजनालार्इ लहड लागे पछि सात जनावाट शुरू भएको नो प्यान्ट सबवे राइड १२ वर्षमा अाइपुग्दा एक महादेशवाट अर्को महादेश पुगिसकेछ । अमेरिकी महादेशवाट अस्ट्रेलियासम्म र एक देशवाट २५ देशसम्म विस्तार भै सके छ ।
अमेरिकाको थुप्रै शहर र विश्वका २५ देशका साठी सहरमा यसपाला १२ अेो नो प्यान्ट सबवे राइड दिवश मनाइयो रे ।सन् २००२ मा न्युयोर्कमा वस्ने एक युवा चार्ली टडको दिमागमा एउटा रमाइलो तर सार्वजनिक रूपमा जिस्किने जुक्ति फुरेछ । र यो कुरा उसले छ साथीलाइ सुनाए छ । उसको विचार सुनेपछि ती छ साथीलार्इ टडको विचार मनपरेछ । उनीहरूले सल्लाह गरेर जनवरीको मध्य जाडोका दिन सवै पहिरन लगाउने तर प्यान्ट नलगार्इ सबवेमा पुगि रेल चढ्ने निर्णय गरेछन् । त्यसपछि यिनीहरूले इम्प्रुभ एभ्रिह्वेर नामक एक समूह वनाएछन् । अनि विभिन्न स्टपवाट सबवेवाट रेलमा चढेर सवैलार्इ छक्क पारेछन् । संस्थापक चार्ली डटको भनाइमा सर्वसाधारणलार्इ मनोरन्जन गराउनेवाहेक यसको अर्को कुनै उद्देश्य छैन रे । यसरी हिंडदा उनीहरू एक अार्कालाइ नचिने जस्तो गर्ने अनी सामान्य रूपमा केही नभएको भानमा अरू वेला जस्तै गरी हिंड्दा रहेछन् । धेरै नै हुस्सु भएको भानमा ।
अहिले धेरै देशमा मनाउन शुरू भै सकेको यो नो प्यान्ट सबवे राइड मा हजारेोँको संख्यामा मानिस पुग्न थालि सके । के त अव हामीले पनि यस्तो कुरा उनीहरूवाट सिक्ने त। हजारेोँको जनशक्ति एउटा उत्पादनशिल कार्यमा केही घंटा लगाउन सकेको भए वरू केही उपलव्धी हुन्थ्यो कि । यति शक्तिले कुनै राम्रो कामको प्रचार प्रशार गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो कि । यि पश्चिमाहरू पनि गजवका छन् फेरी यीनले जे गरे पनि सवैले यिनका पछिनै किन लाग्न परेको होला । लेो हेर्नुस त एउटा सनकाहालार्इ सनक चढेको कुराले अाज एउटा महादेश वाट अर्को महादेश हुदै २५ देशका६० शहरमा एक दिन कटटु लगाएक हिड्न थालि सके । मैले उता वस्दा सुनेको र चासो नलिएको कुरा अाज नेपालका नाम चलेका पत्रिकाले लामै पृस्ठ वनाइ छापेको देख्दा अली समय पछि हामीलेनै काठमाडेो शहरमा एक दिन यसरी नो प्यान्ट सबवे राइड मनाएको देख्न नपर्ला भन्न सकिन्न । किनकि उताको नक्कल छिट्टै गर्ने हाम्रो वानी छ ।
This entry was posted on फ्रेवुअरी 3, 2013 at 2:18 बेलुका and is filed under वर्गविहीन.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.